UiPath: Adeegga Isku-xidhka Shabakadda - Khabiirka Cilmiga ah
Boggaga internetka waxaa lagu dhisaa luuqadaha barnaamijyada sida XHTML iyo HTML waxayna ku jiraan waxyaalo badan Macluumaad muhiim ah oo ku jira foomka qoraalka iyo muuqaalka. A warshad shabakadeed waa Barnaamijka Interprogramming Interface (API) kaas oo soo saara xogta laga helo blogyo badan iyo goobo firfircoon. Shirkadaha sida Google iyo Amazon waxay bixiyaan daraasado qalabaynta shabakadda si aad shaqo u hesho. UiPath way ka fiican tahay adeegga shabakada caadiga ah ee adeegga ama farsamada. Qalabkani wuxuu si toos ah ugu galayaa goobta, wuxuu isku duba ridaa xogta ku jirta boggaga internetka ee kala duwan, filtarrada una bedelaya qaabab kala duwan. Dabadeed wuxuu si toos ah u soo geliyaa faylasha qadka adag iyo waxaad ku badbaadineysaa waqtigaaga iyo tamartaada. Waxay u egtahay barta shabakada internetka-waqtiga dhabta ah iyo ceejinta oo muujin karta goobtaada. UiPath waxay ka caawisaa hagaajinta darajooyinka mashiinka raadinta ee shabakadaada oo waxay abuurtaa wakiilada internetka caqli leh adiga.
Bartilmaameed bogga internetka:
Waxaad soo bandhigi kartaa xogta la xoqay labadaba offline iyo online. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in xogta xoqdo laga helo bogga internetka ama meheradda e-ganacsiga, waa inaad gashaa URL-kiisa oo ha UiPath u qabato hawsheeda. UiPath waxay isbarbar dhigi doontaa macluumaadka qiimaha iyo sharaxaadda alaabta ee Alibaba, eBay, iyo Amazon, oo ku siinaya natiijooyin sax ah oo lagu kalsoonaan karo.
U fiican ee xirfadleyda:
UiPath waxay hubisaa wax soo saarka waxayna u fiicantahay xirfadleyda, kuwa horumariya, kuwa websaydhka ah, iyo ganacsatada. Waxay sare u qaadaysaa mashaariicda soo saaridda xogta waxayna kugu soo kordhisaa natiijooyin aad u macquul ah oo wax ku ool ah. Sidoo kale, qalabkani wuxuu u fiicanyahay cilmi-baarayaasha waxayna ka caawisaa iyaga xayeysiis online joornaal iyo eBooks ku habboon.
Inter-user friendly friendly:
UiPath waxaa ugu fiican ee loo yaqaan interface interface-user. Waxaad si sahlan u xoqin kartaa qoraalka ka imaanaya portals safarka iyo blogyada gaarka loo leeyahay adeeggan. Waxay sidoo kale xoqin kartaa sawirrada, fiidiyowga iyo faylasha codka, dokumentiyada PDF iyo faylasha HTML ee isticmaalayaasha. Qalabkani wuxuu si fiican u shaqeeyaa boggag kasta oo shabakadeed, iyada oo ay uga mahadcelineyso sifooyinka gaarka ah ee suurtogalka ah.
Awoodaha dhoofinta ee weyn:
Si ka duwan noocyada kale ee shabakada burburinta caadiga ah, UiPath waxay leedahay awood karti dhoofin. Iyada oo qalabkan, waxaad ku kaydin kartaa xogta la xoqay ee faylka qoraalka ah, dhoofinta XML iyo HTML, ama nuqul dijitalka ah. Qalabkani wuxuu ku waafaqsan yahay dhammaan nidaamka hawlgalka iyo shabakadaha internetka. UiPath waxay sameysaa falanqeyn qotodheer, waxay abuurtaa warbixinno kooban, oo waxay kuugu dhejisaa xogtaada la xoqdo si ay u isticmaasho FTP si aad u isticmaasho. Waxaad xitaa u soo gudbin kartaa diskkaada adag ama waxaad ku kaydin kartaa xogta macluumaadka ku jira.
Noocyada qurxinta ee fiican: